Italia: Ravan’ny Afo Ilay Tranom-Bakoka ‘Città della Scienza’ ao Napla · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Mirella Biagi
Voadika ny 24 Mey 2013 4:21 GMT
[Ny rohy rehetra dia mitondra any amin'ny pejy Italiana afa-tsy izay asiana fanamarihana mifanohitra amin'izany]
Ny harivan'ny 4 Martsa 2013 afobe mijoalajoala no namotika ny “Città della Scienza” [en], tranom-bakoky ny siansa mpisava làlana ao Bagnoli, Napla.
Niorina teo anelanelan'ny taona 1989 sy 1992 ity ivon-toerana ity tao amin'ilay faritry ny indostria taloha ao Bagnoli, toerana nisy ny foiben'ny orinasa ILVA-Italsider teo aloha, izay nikatona noho ny krizin'ny akoram-by sy ny loton'ny tontolo manodidina aterany. Ny fototra niorenan'ity ivon-toeran-javakanto ity dia avy amin'ilay Cité des sciences et de l'industrie ao Parisy, tetikasa iray noforonin'i Vittorio Silvestrini, filohan'ny Fikambanana IDIS-Città della Scienza. Tanatin'izao 10 taona nodiaviny farany izao dia olona eo ho eo amin'ny 350 000 isan-taona no mitsidika ilay ivon-toerana. Toy izao avy no hita ao amin'izany ivon-toerana izany: tranom-bakoka iray “interactif” , planetarium iray, faritra iray fanaovana famelabelaran-kevitra, ivon-toeram-panofanana iray ary faritra hanaovana fampisehoana mivelatra ara-javakanto iray.
Nanohina indrindra ireo mponina ao an-toerana izany vaovao mahatsiravina izany izay nahatonga azy ireo nanokatra adihevitra teo noho eo tanaty tambanjotra sosialy isan-karazany (indrindra ny Twitter). Ny sasany amin'izy ireo tsy nanafina mihintsy ny amin'izao zava-mitranga izao ka ninoan'izy ireo fa ny Camorra [en] no nahavita izao fihetsika feno habibiana izao:
@sechi1964: Vao volana vitsivitsy lasa aho no nitsidika ny Città della Scienza. Toerana iray, ho azy manokana, afaka maneho ny fiavotan'i Napla izy. Nandoro antsika rehetra ilay afo.
@itsmeperp:Nodoran'ny Camorra ny Città della Scienza ary avy eo dia miandry ny vola be ho fanarenana izy. Ary dia mandoa… isika.
@MiguelCavalle: May ny Città della Scienza ao #Napla ary maika dia maika amin'ny fanarenana ny #CampaniaRegion… Nahoana no tsy novahàna ny olana talohan'ny nandoran'izy ireo…?
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy i Marcello Signore:
Nakany amin'ny “Città della Scienza” foana izahay fony mbola ankizy: nahita dinozaoro maromaro aho, fampisehoana mivelatra “interactif” maro, nihaino famelabelaran-kevitra. Nahazo loka anankiray aho, lokako voalohany, ny “lokan'ny poeta”. Tsy ho adinoko mihitsy izany. Eo amin'ny 500 metatra miala ny tranonay ny “Città della Scienza”, nefa toy ny lavitra tamiko izany. Naneho fiovana, fanavaozana, fivoarana izany.
Ao anatin'ny habaka filazam-baovaon'i Napla, IlMattino.it, maro ireo olona teo an-toerana no naneho ny heviny momba ilay tranga:
Natalia 13ful: Homamiadan'ny taninay ianareo. Eritrereto anie ireo olona 170 lasa tsy manana asa sy ireo fianankaviany, ho an'ny tombontsoa malotonareo.
Pietro Treccagnoli: Mety ho azontsika ihany angamba ny niaviany sy ny antony nahatonga ilay hloka bevava. Nefa misy foana ny zavatra tsy azo hazavaina, indrindra ho andry zareo Napolitana: Ahoana koa no ahafahana mipetraka ao anaty tanàna izay tsy mamokatra fahatsiarovan-tena akory ny siansa.
Francesco Grillo: Indrisy anefa fa misy hafatra entin'iny afo iny dia ny hoe tsy mbola afaka ny hiaina anatin'ny fahafenoana ara-dalana ho azy i Napla: vola betsaka no mbola ilaina holaniana – eo ho eo amin'ny telo lavitra euros – ilaina amin'ny fikarohana ara-tsiantifika mandritra ny fito taona manaraka ao Napla, tohanan'ny Komisiona Eoropeana: nefa taorian'ilay faharavana omaly dia nihena indray ilay fanantenana kely hanararaotana izany fanohanana izany.
Maneho hevitra ilay mpanoratra fanta-daza Roberto Saviano, izay nanoratra ny boky nanaovana ilay horonantsary Gomorra:
@robertosaviano: Fanahy iniana sa tsy nahy? Hatramin'izay dia efa nikasa ny hanangana ao Bagnoli ireo Mafia ireo: naneho ny tsy fahombiazan'ny Napla iray hafa ireo lelafo tao amin'ny Città della Scienza.
Ny Bilaogin'ny Fiasco Job dia nitatitra:
Ankehitriny dia ao anaty lavenona i Napla – hoy i Roberto Saviano nanoratra – mpikarama 160 no tsy mahalala akory hoe raha ho afaka ary rahoviana izy ireo no hiverina hiasa indray…kàrana manoloana ny ranomasina. Potika tanteraka ilay ivon-toerana ara-tsiansa, ny planetarium sy trano fitehirizana enina mirefy roa arivo sy iray alina metatra toradroa ary mihoatra ny roa alina euros ny fahapotehana. Tsy misy afa-tsy ny trano filalaovana an-tsehatra sisa no tavela tamin'izany rehetra izany, ary eo no tsy maintsy hiiainga ny fanorenana vaovao indray.
Città della Scienza, jery an'habakabaka taorian'ny afo. Sary nalain'ny Mattino.it
Voafehy ny afo taorian'ny 13 ora ary naminavina ireo mpanao fanadihadihana fa tena efa olona zatra ady ireo nanao ny habibiana, nandoro ilay tranobe fotoana fohy taorian'ny fikatonany mba tsy hisy vavolombelona. Niahiana ho niainga tamin'ny teboka 12 samihafa ny fihavin'ny afo ka mahalasa ny saina hieritreritra fa nitady ny handrava tanteraka ilay fotodrafitrasa ireo olona tomponandraikitr'izao faharavana izao — izay nohamafisin'ny valin'ny fanadihadihana voalohany. Angamba indray andro any mbola hamoaka ny antony marina ny amin'izao fahapotehana izao ny mpanao fanadihadihana sy ny fitsarana (ara-politika, ara-toekarena na ny Camorra).
Raha mikasika ny fananganana indray, ny Minisitry ny Firaisam-paritra, Fabrizio Barca, dia nanao fanambarana maika fa vola 5 tapitrisa euros no efa vonona ary mety hahatratra 20 tapitrisa euros ny fitambarany, tafiditra ao anatin'izany ny fanarenana ireo faritra indostrialy. Fampanantenana hafa ihany koa no nataon'i Franceso Profumo, Minisitry ny Fampianarana, sy ny Oniversite ary ny Fikarohana: tokony ho tafatsangana ao anatin'ny 18 volana ny Città della Scienza. Nanome fanazavana manan-danja iray mikasika ny toerana hisy ny fananganana vaovao ny Governoran'ny Campania region, Stefano Caldoro, manamafy ny toerana hisy ny fananganana: “Tsy misy na dia iray aza mieritreritra hamindra ny ivon-toerana ara-tsiansa miala an'i Bagnoli ho amin'ny faritra hafa. Manome toky anareo aho ny amin'izany”.
Nandritra izany fotoana izany, ny manampahefana tao an-toerana sy ireo olo-malaza ary ireo olom-pirenena tsotra dia nanomboka nanao karazana fandraisan'andraikitra samihafa ho amin'ny fanarenana indray. Ao anaty Facebook, nitsangana ny vondrona Ricostruiamo Città della Scienza, etsy andanin'izany ilay fanentanana voalohany natao ho fanangonam-bola (crowdfunding) ao amin'ny habaka DeRev dia efa nahavory sahady vola mihoatra ny 51.000 euros ny 12 Martsa. Ny MADRE (Tranom-bakoka momba ny zavakanto Moderna Donna Regina) ao Napla dia nanambara fa hanolotra ny 10% n'ny vola azony amin'izao volana manaraka izao ho an'ny fanarenana. Carlo Rubbia, ilay nahazo ny loka Nobel tamin'ny Fizika, dia nanolo-kevitra ny hananganana komity ad hoc ho amin'ny fanarenana indray.
Ny filazam-baovao iraisam-pirenena koa dia nilazalaza nikasika izany toe-java-nitranga izany — toy ny habaka frantsay CetteSemaine [fr]:
“Iray amin'ireo tendro Italiana ao anatin'ny zato tena tsara”, “iray amin'ireo mpikotrika tetikasam-pandraharahana vaovao”, izy no “tranom-bakoka tsara indrindra tao Eoropa ” taloha, “sady ivon-toerana iray fanaovana famelabelaran-kevitra, no ivon-toeram-panofanana ary taninketsan'ny orinasa madinika” sns. Izany no Città della Scienza teo aloha. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy lavenona sy arina ary ireo fitaovana famonoana afo sisa hita ao. Mamofona latsaka kely noho ny rano ilaina amin'ny fikarohana ara-teknolojia izay miparitaka toy ny faty eny rehetra eny ao amin'izao fotoana izao…
Nanolotra ny antsipiriany mikasika ny fanangonam-bola ny habaka anglisy Ecsite, ivon-toeran'ny tambajotra Eoropeana momba ny tranom-bakoka sy ny siansa:
Afobe nijoalajoala no nandrava tanteraka ny ivon-toerantsika tao Napla omaly hariva. Ny nofinofintsika, ny 20 taona niasàna, ny zavatra rehetra napetraka mikasika ny tetikasa, may tao anatin'ny ora vitsy nandritra ny alina. Mila ny fanohanan'ny isam-batan'olona izahay, na aiza na aiza misy anao, mba hinoana ny ainga vaovao.” Ireo fanohanana ho amin'ny fanorenana ny Città della Scienza dia azonareo arotsaka ao amin'ny kaonty banky: IBAN IT41X0101003497100000003256 BIC IBSPTINA. Manitatra ny fanapahan-kevitra hanohanana ny Città della Scienza amin'ity fotoan-tsarotra ity ny Ecsite na ny ivon-toeran'ny tambajotra Eoropeana momba ny siansa sy ny tranom-bakoka. Mpikambana mpanorina ny Ecsite ilay ivon-toerana, mpikambana mavitrika tokoa teo aloha ary tena namokatra ho an'ny fikambanana. Nandray an-tanana ny famelabelaran-kevitra nataon'ny Ecsite izy ary niandraikitra ny fitantanana nanomboka ny 2007 ka hatramin'ny 2009.
Farany, nampiaka-peo mba ho re ireo mpianatra teo an-toerana tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra samihafa imasom-bahoaka, tao anatin'izany ny diaben'ny fanoherana tao afovoan-tananan'i Napla ny 8 Martsa. Nisy fanoherana hafa ihany koa nanaraka izany ny andro nanaraka azy io sy fandraisana anjara mavitrika taminà flashmob iray, natao ny marainan'ny 10 Martsa teo anoloan'ny toerana nisian'ny afo — izay toy izao manaraka izao ny sary nalaina tamin'izany:
Città della Scienza, Napla, 10/03/2013. Sary avy tamin'i Ornella Sarrocco, tao amin'ny Facebook.